कान्ति बाल अस्पतालमा नर्सको अभाव
काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । बालबालिकाहरूको केन्द्रीय अस्पताल ‘कान्तिबाल अस्पताल’मा नर्स अभावका कारण आईसीयू सञ्चालन हुनबाट रोकिएको छ । देशभरबाट रिफरल सेन्टरको रूपमा स्थापित कान्तिबाल अस्पतालमा हाल ५२ वटा आईसीयू (सघन कक्ष) बेड रहे पनि नर्स अभावमा ३६ वटा मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
बाउन्न बेड आईसीयू सञ्चालन गर्नका लागि अझै कम्तीमा पनि २२ जना नर्सको आवस्यकता रहेको भन्दै अस्पतालका निर्देशक डा. गणेशकुमार राईले भइरहेको दरबन्दी पनि खाली रहेकोले आईसीयु सञ्चालन गर्न बाधा भइरहेको बताउनुभयो ।
अस्पतालका निर्देशक डा. राईले कान्तिबाल अस्पतालमा आईसीयू मिलाउनका लागि नेतादेखि उच्च ओहोदाका व्यक्तिको समेत फोन आउने गरेको गुनासो गर्दै कान्तिमा जहिले पनि आईसीयू खाली नहुने बताउनुभयो । बालबालिकाको केन्द्रीय अस्पताल भएकाले देशभरबाट यही रिफर गरिन्छ निर्देशक डा. राईले थप्नुभयो, “यहाँ आईसीयूको प्रशस्त बेड नहँुदा सर्वसाधरणले निजीमा गएर आईसीयूमा महँगो शुल्क तिरिरहनुपरेको छ । ”
नेपाल सरकारतर्फ ८४ जना दरबन्दी रहे पनि हाल सातजना नर्सको दरबन्दी खाली रहेको उल्लेख गर्दै निर्देशक डा. राईले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातजना नर्सिङ स्टाफ पठाएमा सञ्चालन भइरहेको ३६ वटा आईसीयूलाई बढाएर ४० वटा आईसीयू बेड सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट नर्स राख्दा तलबभत्ता दिनसक्ने स्थिति नरहेको भन्दै निर्देशक राईले थप्नुभयो, “हामीले १२ वर्षअघिको दरबन्दी अनुसार काम गरिरहनुपरेको छ । ” १२ वर्षअघि दैनिक आउने बिरामीको सङ्ख्या र अहिलेको सङ्ख्या तुलना गर्ने हो भने सयौँ गुणाले बढिसकेको छ, निर्देशक राइले भन्नुभयो, “१२ वर्षअघिको दरबन्दीले अब अस्पताल धान्न सक्ने अवस्था छैन । ”
कान्ति बाल अस्पतालकी नर्सिङ प्रशासक निवारण जोशीले आईसीयूमा एक बिरामी बराबर एकजना नर्स आवश्यकता हनुपर्नेमा हाल एकजना नर्सले आठजना बिरामीलाई हेरिरहनुपरेको जानकारी दिनुभयो । एकजना नर्सले धेरै जना बिरामी हेर्न नभ्याउने भन्दै उहाँले कान्ति अस्पतालमा नर्सलाई बिरामीको आफन्तले कुटपिटसमेत गरेको घटना सुनाउनुभयो ।
‘बहिरङ्ग सेवामा त नर्सको हालत झन् खराब छ’, निर्देशक जोशीले भन्नुभयो, “एकजना नर्सले २६ बेड हेर्नुपरेको छ । ” यस्तो अवस्थामा बिरामीको हेरचाह गर्न सम्भव नहुने भन्दै नर्सिङ निर्देशक जोशीले एउटै नर्सले २५ बेडका बिरामी हेर्न सम्भव नहुने बताउनुभयो ।
तत्काल ५० जना नर्सको पूर्ति हुन सके अस्पताललाई सहज ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिने नर्सिङ प्रशासक निवारण जोशीको भनाइ रहेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. गणेशकुमार राईले १२ वर्षअघि १५० बेड सञ्चालनमा आएको बालअस्पतालको दरबन्दी अहिले पनि नबढ्नाले समस्या निम्त्याएको गुनासो पोख्नुभयो ।
एक सय ५० बेडबाट अहिले तीन सय ५१ बेड सञ्चालन भइरहेको छ, राईले भन्नुभयो, “१२ वर्षअघिको दरबन्दी त्यो पनि १५० बेड सञ्चालन गर्नको लागि तयार गरिएको दरबन्दी १२ वर्षपछि अस्पताल १५१ बेडमा सञ्चालन हुँदा पनि त्यही दरबन्दी र नर्सहरू रहेका छन् ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालय नर्सिङ अधिकृत कविता अर्यालले नर्सिङ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सात हजार नर्स रहेको जानकारी दिँदै उक्त दरबन्दी वर्षौं पुरानो भएको बताउनुभयो । बीस वर्षअघिको दरबन्दी अनुसार नर्सहरू रहेका छन् अर्यालले भन्नुभयो, “अहिले आवश्यकता अनुसार दरबन्दी कायम हुन सकेको छैन । ”
आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले अधिकृतस्तरको दरबन्दी कति चाहिने हो त्यसको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै अधिकृतस्तरको सङ्ख्या सकेपछि स्टाफ नर्सको दरबन्दी अध्ययन गरिने बताउनुभयो । दरबन्दीअनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा नर्स अपुग रहेको स्वीकार्दै उहाँले कति सङ्ख्यामा आवश्यकता हो, अध्ययनपछि पदपूर्ति हँुदै जाने छ भन्नुभयो ।
काँक्राको माग वृद्धि, मास